“अनुशासन शिक्षा” « News of Nepal
अनुशासन हाम्रो जीवनको एउटा अमुल्य विषय वस्तु हो।अनुशासनको पहिलो खुड्किला परिवार हो भने,दोस्रो विद्यालय हो। यो विना सभ्य समाजको कल्पना गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। स्वस्थ समाजको निर्माण र सञ्चालनमा -‘त्यो जनसंख्याको ठूलो हात छ, जुन कुनै पनि प्रकारको अनुशासनमा इम्बेड भएको कारणले सम्भव छ’।वास्तवमा,अनुशासनको प्रक्रिया मात्र रैखिक छैन, तर त्यो चक्रीय पनि हो।
उनी फर्किए र फर्किए, तर ठ्याक्कै त्यस्तै तरीकाले होइन फरक तरीकाबाट। यस्तो अवस्थामा यदि सिधा रेखा कोरेर अनुशासनको रूप निर्धारित गर्ने प्रयास गरिन्छ भने,त्यहाँ दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ। किनकि ‘अनुशासनविना न परिवार चलाउन सकिन्छ, न त एउटा सिङ्गो राष्ट्र र संस्था नै।’ यसको सामान्यता यस तथ्यबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ ! जुन अनुशासन भन्ने शब्द कुनै न कुनै रूपमा समाजको सानो इकाईदेखि ‘विश्व-समाज’ को अवधारणा सम्म यसको विभिन्न अर्थ संग सम्बन्धित रहेको छ। तर, यसको मौलिक अर्थमा, अनुशासनको अर्थ एउटै हो। यो हेर्नु पर्दछ अनुशासनको प्रकृति जताततै एकै छ, वा यो परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्व जस्तो हरेक तहमा फरक फरक छ ।
कुनै पनि राष्ट्रको परिचय यसका अनुशासित नागरिकबाट हुन्छ’। तर त्यहाँ उही देशको रक्षा गर्न एक फौज पनि हुन्छ। सेनाको आफ्नै अनुशासन हुन्छ,जहाँ नियमहरू कडाईका साथ पालना गरिन्छ,गराइन्छ र गरिएको हुन्छ। सुरक्षाको प्रश्नको कारण, त्यहाँ अनुशासनका मानदण्डहरू बनाइएका छन्, जुन सम्झौता हुन सक्दैन।
तर,अनुशासनको सरल रूप समाजमा देख्न सकिन्छ, जहाँ मानिसहरू आपसी सद्भावको साथ कुनै द्वन्द्व विना बाँच्दछन्। आखिर, ती कारणहरू के कारण हुन् ! जुन ‘शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व’ को भावना कुनै पनि समाजको मेरुदण्ड हो? समाज विभिन्न समुदाय, त्यसपछि राष्ट्र र विश्वमा सामेल भएर गठन हुन्छ। जहाँसम्म हरेक क्षेत्रमा विविधता छ, ‘विश्व-मानव’ र ‘विश्व-समाज’ को परिकल्पना गरिएको छ, जुन अनुशासनमा जड छ। जुन क्षेत्र अनुशासन को सीमा पनि निर्धारित गरीएको छ।जहाँ अढिक रहिरहेछ।
जबकि शिक्षाको उद्देश्य समाजलाई राम्रो नागरिक प्रदान गर्नु हो, जो स्वस्थ समाज निर्माणमा साझेदार बन्छन्। अनुशासनको लक्ष्य शिक्षामा नैतिकतालाई समर्थन गर्नु हो, यद्यपि अनुशासनको पहिलो स्कुल परिवार हो, तर यसका स्कुलहरूले स्वस्थ समाज निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रो स्कूलमा अनुशासनको प्रकार कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यससम्म कि,जब विद्यार्थीहरूले विनम्रता,संयम,नम्रता र ज्ञान जस्ता गुणहरू विकास गर्छन्, विद्रोहको भावना पनि जन्मेको सम्भावना बराबर छ। धेरै व्यक्ति सैन्य परिसरमा अनुशासनको अर्थ खोज्छन्, यसको कठोर नियमहरू र यसको पालन गर्दछन्। हाम्रो स्कुल यी पूर्वाग्रहहरूको सबैभन्दा ठूलो शिकार हो। के सैन्य परिसरको नियमहरू र उनीहरूको कडा पालनाले मूर्खतापूर्ण वा बुद्धिमानी विद्यार्थीहरूलाई केहि सिक्न मद्दत गर्दछ?
धेरै जसो शिक्षकहरू स्कुलमा अनुशासनको सही अर्थको बारे अनजान छन्। तिनीहरू जब बच्चाहरूलाई निडर बिना कसरी पढ्ने, पढाउने भनेर भनेको सुन्न सकिन्छ ! र खेलेर के हुन्छ? खेल को आवश्यकता के ? यो धेरैको अन्जानको विषय हो। धेरै जसो विद्यार्थीहरू खेलकुदमा रुचि राख्छन् र त्यस्ता धेरै अवसरहरू हुन्छन्। जब विद्यार्थी आफैले खेलाडीको रूपमा नियमहरू पालना गर्छन् र पछि उनीहरू समाजको नागरिकको रूपमा निरन्तरित हुन पाउँछन्। वास्तवमा, खेल ‘आत्म-अभिप्रेरित अनुशासन’ प्राप्त गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हो, जसलाई गान्धीजीले व्यक्तिगत अनुशासन भन्नुभएको छ।
जबसम्म व्यक्ति आफैंमा अनुशासन र आज्ञाकारिताको अधीन हुँदैन, उसले अर्कोसँग पनि त्यस्तो आशा गर्नु व्यर्थ हुन्छ। त्यहाँ एउटा पुरानो कथा रहेको छ। जसमा गुरु नानकलेे सात दिन पछि आउन आफ्नो आमालाई समय दिन्छिन् जसले उनको बच्चाले धेरै मिठाई खाएको गुनासो गर्छिन्। यी सात दिनसम्म, आफैंमा मिठो खाना छोडेपछि, उनीहरूले बच्चालाई मिठो गुणहरूको बारेमा व्याख्या गर्छन्।
‘आत्म-प्रेरित’अनुशासनले मानव मूल्यमान्यताको लागि ठाउँ बनाउँद छ। पहिले ‘सामुदायिक कार्यमा भाग लिनु’ र ‘विद्यार्थीहरूको व्यवहार’ शिक्षा अन्तर्गत मात्र पूर्तिको रूपमा लिइन्छ। जुन अनुशासनिय पूर्णांकहरूसँग सम्बन्धित छ। किनकि, उसको स्कोर स्कोरसँग सम्बन्धित थिएन। तर, अब ‘निरन्तर र व्यापक मूल्यांकन’ को अवधारणा शिक्षा प्रणालीमा अपेक्षित परिवर्तन अन्तर्गत समाहित भएको छ, विद्यार्थीको सम्पूर्ण मूल्यांकनकर्ता उसको शिक्षक हुनेछन्। यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूको दायित्व अझ बढेको छ। शिक्षकले आफ्नो दायित्व बढे सँगै आफू थप दृण हुन जरुरी हुन्छ । किनकि, विद्यार्थीको भविष्य शिक्षकको हातमा हुन्छ ।
उनीहरूले विद्यार्थीहरूको व्यवहारलाई अन्य विद्यार्थी र शिक्षकहरूबाट र खानाहरू स्तम्भहरू सामुदायिक गतिविधिहरूको साथ लिन्छन्। त्यसो भए तपाईले मानव मूल्यमान्यताहरूलाई पाठ्यपुस्तकहरू बाहेक सही अर्थमा विद्यार्थीमा प्रसारित गर्न सक्नु हुने छ या छैन । यो एक शिक्षकको हातमा रहने कुरा भयो ।
नोट:- यो लेख विभिन्न पत्रपत्रिका पुस्तकहरू तथा वेवसाइडहरूबाट खोज अध्यायनका साथ लेखिएको हो ।